सुवर्ण अवसर ! राष्ट्रिय यू १६ खेलाडी छनौट हुँदै, प्रयास गर्नुहोस्… – Khel Dainik
सुवर्ण अवसर ! राष्ट्रिय यू १६ खेलाडी छनौट हुँदै, प्रयास गर्नुहोस्…
बैशाख ११, २०७४ | (PostaComment)
यदि तपाईं १६ वर्ष भन्दा कम उमेर समूहका हुनुहुन्छ ? फूटबल खेल्ने गर्नुभएको छ ? नेपाली राष्ट्रिय टीमको जर्सी पहिरिएर देशको प्रतिनिधित्व गर्दै विदेशमा खेल्ने अवसरको खोजीमा हुनुहुन्छ ? प्रतिभा भएका खेलाडीलाई यो मौका मिलेको छ ।
अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले यही बैशाख १६ देखि २० गतेसम्म छनौट गर्ने भएको छ । एन्फा कम्प्लेक्स सातदोबाटोमा खेलाडी छनौट हुनेछ । छनौट भएका खेलाडी एएफसी यू १६ छनौट खेल्ने सुवर्ण अवसर मिल्नेछ । खेल यही सेप्टेम्बर २० मा नेपालमै हुनेछ । भारत, ईराक र प्यालेष्टाईन रहेको समूहमा नेपाल रहेको छ ।
ईच्छुक खेलाडीले यथाशीघ्र एन्फा कम्प्लेक्समा सम्पर्कका लागि आग्रह गरेको छ । उपत्यकाबाहिरका खेलाडीले आफ्नै खर्चमा सबै व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । ईच्छुकले एन्फाको फोन नंं ५२०१०६०, ५२०१०६२ र ५२०२३१९ मा सम्पर्क गर्न सक्नेछन् ।
← संरक्षकभूषण र प्रणव क्वाटरफाइनलमा नव जनजाग्रिती क्लब सेमिफाइनलमा प्रवेश →
अफ्रिदीले इपिएलमा सबै म्याच नखेल्ने बैशाख ११, २०७४
मल्लको स्थानमा भुर्तेललाई कप्तानी बैशाख ११, २०७४
गलाक मुवाँथाई फाइट हुने बैशाख ११, २०७४
नेपाली टेबलटेनिस टोली कतार जाने बैशाख ११, २०७४
पलेशालाई अर्को सम्मान बैशाख ११, २०७४
फुटसल फाईभ र लुम्बिनी फुटसलको बराबरी बैशाख ११, २०७४